I-Scup: Ukuqapha Imidiya Yezenhlalo, Ukuhlaziya kanye Nokuzibandakanya | Martech Zone
Scup iskoop esishiwoyo - iqale eBrazil futhi manje isekela isiNgisi, isiPutukezi neSpanishi. Kwamabhizinisi nama-ejensi, iScup inazo zonke izici ezibalulekile zesikhathi sangempela sokuqapha imithombo yezokuxhumana, ipulatifomu yokushicilela nokuhlaziya.
IScup iyithuluzi elihamba phambili lokuqapha imithombo yezokuxhumana futhi lisetshenziswa ngabachwepheshe abangaphezu kwezinkulungwane ezingama-22 I-Scup isiza abaphathi bezindaba zenhlalo ngamandla ngomsebenzi wabo kusuka ekuthumeleni kuya ekuhlaziyweni, kukhulisa ngokuphumelelayo ukusebenza kwabo kahle.
Izici Nezinzuzo ZeScup
Gada ezokuxhum - Scup usebenza amahora angu-24 ngosuku, izinsuku ezingu-7 ngesonto, ukuqapha zokuxhumana ngokuzenzekelayo ukuze akudingeki. Bhalisa amagama angukhiye bese uthola ukuthi kushiwani ngomkhiqizo wakho nangabancintisana nabo ku-Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn, Vimeo, Flickr, Orkut, Instagram, Tumblr, Slideshare, Foursquare, Google, Google +, Yahoo! Blogs, izindaba, ama-RSS feeds, amawebhusayithi kanye neminye imithombo yezokuxhumana. Hlunga izinto eziqoqiwe njenge omuhle, kubi futhi ukungathathi hlangothi ngokokuhlola kwakho. Ngeza amathegi ukuze uhlukanise izinto zakho.
Khomba - Yazi ukuthi ubani okhuluma ngomkhiqizo wakho. Kungenzeka ukukhomba abantu abanethonya nalabo abakhuluma ngomkhiqizo wakho kakhulu, imizuzu nje embalwa ngemuva kokwenza usesho lwakho. Kwenze ngokushesha izingxoxo zenethiwekhi endaweni yesikhulumi. IScup ifaka izingxoxo nokuxhumana, ukuze umane ugxile kuzinkinga futhi ungakhathazeki ngokugcina ithrekhi yokuthi ngubani.
Shicilela - Thumela kumanethiwekhi wakho wokuxhumana nomphakathi usebenzisa i-Scup. Bhalisa amaphrofayili wakho we-Twitter, Facebook ne-Youtube bese uthumela ama-tweets, okuthunyelwe odongeni namavidiyo konke ngaphandle kokushiya iSupup. Ukuphathwa kukaScup kufaka amazinga amaningi asuselwa kwimvume. I-centralization ivumela kuphela umphathi wokuqapha ukuphatha amaphrofayili, kepha inika abanye abasebenzi amandla okuthumela nokuphendula. Lokhu kusho ukuthi, umbuzo "iphasiwedi ye-akhawunti yomphakathi?" kuzoba inkumbulo emfushane.
Ukubika - Yenza imibiko uphinde uhlaziye imiphumela. Landelela inqubekela phambili yokuqapha kwakho ngokusebenzisa imibiko yezithombe ehlungiwe ngehora, usuku, isonto, inyanga noma unyaka. Gxila kulwazi oludingekayo ukuhlola isu lakho kumanethiwekhi omphakathi. Futhi uma ufuna ukungcolisa izandla zakho futhi usebenze ngemininingwane eluhlaza, leyo akuyona inkinga. I-Scup ithumela zonke izinto kusuka ekuqapheni kwakho ngqo ku-Excel.
Intengo yeScup iyancintisana nezinkundla zokuxhumana ezithandwa kakhulu embonini; empeleni, ungonga imali engamakhulu ambalwa ngenyanga uma kuqhathaniswa nesisombululo sakho samanje.
Tags: ukuqapha kwesikhathi sangempelascupsocial mediaizexwayiso zokuxhumana nabantuukuhlaziywa kwezokuxhumanaukuqapha ezokuxhumukushicilela ezinkundleni zokuxhumanaukubika ezinkundleni zokuxhumana